Cunto: Grepsr - Hantidhowrka Kordhinta Kormeerka
Grepsr waa shabakad cajiib ah oo sahlan oo shabakadeed, halkaas oo dadka isticmaala ay ururin karaan oo abaabuli karaan kala duwan xogta shabakada. Waxay diiradda saareysaa dadka aan farsamada ahayn kuwaas oo doonaya inay bixiyaan qiimo si ay u helaan xogtooda iyo ururintooda qaab habboon oo habaysan. Qalabkan qalabka dul saaran ee internetka wuxuu bixiyaa faa'iidooyinka soo socda ee isticmaalayaashiisa:
Dakhliga iyo Tamarta
Isticmaalayaasha waxay soo saari karaan tiro xog ah oo ka socda bogagyo kala duwan iyada oo aan la isticmaalin wax dhib ah qalabka software. Kaliya waa inay jadwal u sameeyaan jadwalkooda si joogto ah hawsha loo qabsado. Waa barnaamij software fudud oo la jarayo iyada oo la isticmaalayo interface-user friendly saaxiibtinimo isticmaalayaasha farsamo. Maanta macaamiisha badan waxay isticmaalaan mexaantan si ay u soo saaraan natiijooyin waaweyn shirkadahaas. Grepsr waxaa loo balan qaadayaa inay siiyaan xogta saxda ah markasta oo ay u baahan yihiin.
Wuxuu adeegsadaa aalado wax ku ool ah iyo shaqooyinka la isku qalabeeyey
Grepsr wuxuu isticmaalaa qalab aad u qurux badan, sidoo kale taageero weyn iyo isdhexgalka. Natiijadu, waxay siisaa sahal sahlan dadka isticmaala, kuwaas oo raba inay isticmaalaan qalab gaar ah si ay wax uga soo saaraan wax kasta oo shabakad ah. Tusaale ahaan, barnaamijkan barnaamijka software wuxuu wax ka qabtaa macluumaadka B2B, sida qiimaha badeecada, liiska kaydka, magacyada, iyo xiriirada ganacsiga.
Bixiya Isticmaalayaasha Kooxda Taageerada Amazing
Mar kasta ma ahan hawl fudud oo loogu talagalay raadiyeyaasha webka inay soo saaraan dhammaan xogta ay u baahan yihiin. Tusaale ahaan, haddii ay isku dayayaan in ay soo uruuriyaan sicirka kaydka qaarkood ee bogagga shabakadda iyo website-yada ayaa bedelaya qaab-dhismeedkooda, saaritaankooda saaridooda waxay u baahan yihiin dib u eegid. Tani waa shaqo laga yaabo inay qabtaan khabiirada Grespr oo aan lahayn lacag dheeraad ah.
Yaa Isticmaalaya Barnaamijka Barnaamijka Kaydka Barnaamijka
Waxaa jira tiro shirkado ah oo suuqa ku yaalla oo u baahan in la helo oo abaabulo xogta internetka, sida hay'adaha waaweyn iyo dukaamada. Labadaas waxay ubaahan yihiin macluumaad badan oo tartan ah iyo khubarada Grepsr ayaa iyaga ka caawin kara. Intaa waxaa dheer, shirkadaha yaryar waxay sidoo kale u baahan karaan caawimaad si ay u nuqulaan ugana dhajiyaan xogta webka si toos ah.
Abuuri Mashruucyada Grepsr
Marka dadka isticmaala ay abuuraan mashruuc gaar ah, platformkan software wuxuu baari doonaa oo u soo celiyaa dadka isticmaalaya qadar gaar ah (qiimaha). Marka qiimaha la dhiso, waxaa la sameeyaa soo saaraha macluumaadka, habka ururinta xogtu waxay bilaabmaysaa. Raadinta webka waxaa lagu ogeysiinayaa xirfadlayaasha Grepsr iyada oo la adeegsanayo ogeysiisyada app ama emayl.
Isticmaalkani saaritaanka barnaamijka isticmaalka codsiyada darajada, sidaas darteed dadka isticmaala waxay xaqiijin karaan in dhammaan xogtooda ay nabdoon tahay. Waxaa intaa dheer, waxay u baahan yihiin inay ogaadaan in wakhti kasta ay doonayaan, waxay yeelan karaan koontarool buuxa oo ku saabsan xogtooda Source .